→ Prof Jawaari oo Digniin Adag u diray qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya(Top News)	Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa digniin adag u diray Xubno katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo caadeestay in ay ka maqnaadaan fadhiyada Baarlamaanka ay yeeshaan. Prof Jawaari ayaa xusay in ay jiraan Xildhibaano dhoor ah oo caadeestay in ay ka maqnaadaan Fadhiyada Baarlamaanka kuwaa uu xusay in ay gudaha iyo dibadaba joogaan, waxa uuna ku tilmaamay Xildhibaanada Fadhiyada Baarlamaanka ka maqnaada kuwa ka dhuumanaya waajibaadkii qaran ee hor yaalay. Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaan Xildhibaanada ka maqan Fadhiyada Baarlamaanka waxa uu ka codsaday in ay kasoo qeyb galaan Kulamada Baarlamaanka oo ah kuwa xasaasi ah ayna hor yaalaan qodobo adag . ” Caalamka oo dhan ayaa isha nagu haya , waxaa na horyaala shaqooyin adag waxaa lagu jiraa marxadlad ka duwan kuwii hore , Xildhibaankii ka maqnaada Fadhiyada Baarlamaanka ama dalka ha joogo ama dibad ha joogo waxaan u arkaynaa mid shaqdiisa gabay kana dhuumanaya ” ayuu Yiri Prof Jawaari. Hadalka kasoo yeeray Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa imaanaya xili marar kala duwan sidaan oo kale baaq loogu diray Xildhibaano aan kasoo qeyb galin fadhhiyada Baarlamaanka ,waxaana hada Baarlamaanka hor yaala Mooshin lagu ridayo ama codka kalsoonida lagu siinayo R/Wasaaraha Soomaaliya iyo Xukuumadiisa. Xafiiska Shabakada
← Daawo Sawiro:-Sawirka IsbitalkaDegmada BaxdoIyo Dr faahin ooHalkaasi O HowloKa FuliyaySource www.goboladaradio.com